Izifiso zendoda: izinkinga, umbono kanye nokuhlaziywa | Amadoda aSitayela
Emphakathini wanamuhla kunomqondo wokuthi abesilisa banesifiso esikhulu sobulili kunabesifazane. Lokhu akudingeki ukuthi kuqondane neqiniso. Umuntu ngamunye unamazinga akhe wesifiso futhi angaguqulwa ngokuya ngesikhathi. Kunemigqa yokuthi umuntu angaba nesifiso sobulili esengeziwe futhi kwesinye isikhathi angabi naso. I- izifiso zomuntu wesilisa azihlobene njalo nezocansi.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngezifiso zendoda nokuthi ziyini izinganekwane namaqiniso ngakho.
1 Izifiso zendoda
2 Izifiso zendoda namuhla
3 Ukuqhathanisa okungalungile
4 Indoda nobulili
Yize ngokwenhlalo kwenziwa ngombono wokuthi abesilisa banesifiso sobulili esengeziwe kunabesifazane, akunjalo. Isifiso sivame ukwehla lapho sithola izigaba zokucindezeleka noma uma kunezinkinga kwabashadikazi. Imvamisa kuyizimbangela ezinkulu ezijwayelekile ukuthi zingathinta izifiso zowesilisa. Kulokhu, sithola ezinye izizathu ezihlotshaniswa nokwehla kwabantu bezocansi nokubona ucansi njengesibopho kunokuba kube yintokozo.
Ngaphakathi kwezifiso zendoda kukhona nokulindelwa okuningi kwezenhlalo okungena ezindimeni zobulili. Amadoda kulindeleke ukuthi ahlale efuna ukuba nawo ukuya ocansini akujwayeleki esikhathini esiningi. Khumbula ukuthi iningi lamadoda kufanele lisolwe ngezinkoleloze ngabo. Iqiniso, nokho, ukuthi cishe akekho umuntu ofuna ukuya ocansini ngaso sonke isikhathi. Kucatshangwa futhi ukuthi amadoda ahlala ecabanga ngokuhlangabezana nezocansi.
Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi isikhathi lapho zombili izingxenye zombhangqwana zifuna ukuya ocansini asihambelani. Kunini lapho indoda leyo Awuzwa sengathi kungabonakala njengokungavikeleki ngoba sithanda ukuqhubeka nokuziphindiselela emadodeni ezenhlalo. Kwabesilisa abaningi lokhu kuyakhathaza futhi bacabanga ukuthi ukungabi nasifiso sobulili kungaba kubi kumlingani. Kungenzeka ukuthi, nsuku zonke, sicindezeleke futhi sikhathele futhi simane nje sifuna ukulala phansi kusofa sibe nochungechunge noma sibe isikhashana noma sithule. Lokhu akusho ukuthi umuntu esithandana naye uyekile ukusithanda noma ukuthi asinazo izifiso zocansi ngezinye izikhathi.
Izifiso zendoda namuhla
Namuhla siyazi ukuthi ukusetshenziswa kwezicelo zeselula ukudlala ngothando nokuhlangana nabanye abantu kuyanda. Uma uhlala nomunye umuntu esihlangane naye ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza yisikhathi lapho kucatshangwa ukuthi kungenxa yocansi. Iqiniso lokuthi umuntu uthathe isinqumo sokuthi abe neyodwa Ukuya ocansini kungaba yinto enqumayo yokwazi ukuthi impilo ihambe kahle noma cha. Futhi kungenxa yokuthi izifiso zendoda kungenzeka zingasekelwe ocansini kuphela futhi imane ifune ukuhlangana nomunye umuntu.
Ngesikhathi sokusondelana, lo wesilisa angahle angafuni ukuya ocansini futhi nakubo usuku luphele kahle. Amadoda amaningi eza ocansini ngenxa yengcindezi yawo ethonywe ngumphakathi. Amadoda amaningi azizwa engakhululekile kulezi zinhlobo zamateyipu futhi ancamela ukumazi kangcono umuntu futhi ube nokuzethemba okuthe xaxa ukuze usondelane emkhakheni wezocansi. Uma singakhululekile kulolu hlobo lokuxhumana kungenxa yokuthi ziyabanda noma zinabantu abaningi, kungenzeka ukuthi, uma sekuyisikhathi sokuya ocansini, asinaso leso sifiso.
Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi izifiso zendoda zingashintsha kuye ngesikhathi. Isibonelo, lapho une usuku kanti umuntu useqala ukuxhumana nawe kungenzeka ukuthi ufuna ukulala nalowo muntu. Kodwa-ke, lapho isikhathi sifika, kungenzeka singabi naso leso sifiso noma ngabe besinakho okungakanani phambilini.
Udaba olubalulekile olungaba nomthelela ezifisweni zendoda ukuzethemba kwezinga lomzimba. Amazinga wobuhle awasungulelwe abesifazane kuphela, kepha futhi aya ngokufuna ngenkani kwabesilisa. Sizivumelanisa nokujwayelekile kokuba nomzimba omncane, angancikile kakhulu kuye, enemisipha, njll. Lezi zinhlobo zamakhanoni zisenza ukuthi sakhe ukungavikeleki uma kukhulunywa ngokukhombisa umzimba wethu kwabanye abantu. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu bepenis bungesinye sezizathu eziyinkimbinkimbi kakhulu futhi esithonywe eminye imigomo yomphakathi. Kakhulu kungenxa ye-porn nokuqhathaniswa kwayo okungalungile.
Futhi lokho ukuthatha izithombe zobulili ezingcolile njengesethenjwa sokuthi ubukhulu bepipi kufanele bube yiphutha. Futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi ubudlelwano bezocansi amanye amadoda angaba nabo buhluke ngokuphelele kulokho okulindelekile. Ukuthi owesilisa unezinye izinto azithandayo embhedeni ezingafaniswa nezithombe zocansi akusho ukuthi mubi embhedeni. Ukwesaba, ukungavikeleki nokuzethemba okuphansi kunomthelela ekwakheni nasezikhathini ze-ejaculation. Ukuqhathanisa isikhathi abenza ngaso ucansi ezithombeni ezingcolile uma kuqhathaniswa neqiniso kuyisici esibi kakhulu esiholela ezinkingeni ezinkulu ezihambisanayo.
Noma izinhlobo zemizimba, osayizi bepipi, imikhuba, ukwakhiwa nezikhathi zokujula zinde kangako ezibonwayo kulezi zinhlobo zamafilimu ziguqulwa ngokuphelele zisuke kokungokoqobo okungekho. Ukuthatha konke lokhu njengesethenjwa kuholela ekukhungathekeni kokuzama ukufinyelela kumazinga angenakufinyelelwa. Uma ngabe uke waba noma unethuba lokubona ukuthi i-movie ye-porn iqoshwa kanjani, umcabango wokuthi awuhlangene nakancane ne-movie ehleliwe uzoqinisekiswa nakanjani.
Konke lokhu okungenhla kuhlobene nomqondo wezenhlalo wokuthi amadoda azimisele noma kufanele ngaso sonke isikhathi azimisele ukuya ocansini nokwenza noma ukulinganisa ebudlelwaneni bezocansi. Iqiniso ukuthi kunzima kakhulu ukuvumelana nalokho okujwayelekile ngoba akulona iqiniso nhlobo. Kunokwehluka okukhulu kwezici ezingayiphazamisa. Isibonelo, umuntu ngamunye wehlukile futhi unezinkanuko ezihlukile zocansi nezifiso. Kungenzeka nje ukuthi laba bantu ababili abahlangani kahle kwezocansi futhi akuyena umuntu wesilisa okufanele athwale lowo mthwalo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezifiso zendoda nokuthi yiziphi izici ezibhekwayo emphakathini wanamuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Izifiso zendoda